Akhbaarta Aasaasiga ah ee Kireystayaasha | LawHelp Minnesota
Akhbaarta Aasaasiga ah ee Kireystayaasha (PDF)587.2 KB
Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa akhbaar ay kiraystayaashu u baahan yihiin inay ogaadaan ee ku saabsan xaquuqdooda iyo waajibaadyadooda.
Marna ha kiraysan guri aadan soo arag. Hubi inaad eegto guriga aad doonayso inaad kireysanayso. Ha u ogolaan in qolada gurigu ku tusto “guri la mid ah.” Kaaga.
Ha bixin khidmada codsiga hadii aysan u badnayn inaad guriga heli doonto. Hadii ay jiraan wax akhbaar xun ah oo ku saabsan taariikhdaada guri kireysiga ama kiridhidka, u sheeg qolada guriga ka hor inta aadan khidmada bixin. Inaad u sheegto ma aha qolada guriga akhbaarta qaarkeed. Tusaale ahaan, ma aha inaad u sheegto qolada guriga dambiyo aad horey u gashay ama guri ka saaridyo hore oo lagaa tirtiray (masaxay).
Ka hor inta aysan qoladu guriga qaban khidmada codsiga, waa inay ku siiyaan nuqul qoran oo ah waxyaabaha ay ka rabaan kireystaha (shuruudaha xulashada).
Qolada gurigu ma sarifan karto wax ka badan 1 khidmad codsi markiiba ee guri. Sharcigu waxa uu dhigayaa in lacagtaadu kuu soo noqoto hadii guriga uu qaato qof kale oo codsaday hortaa.
Ma aha in laguu diido guriga hadii aad ka soo baxdo shuruudaha qoran ee qolada guriga. Hadii laguu diido waxa ay noqon kartaa taasi astaan takoor. Eeg warqadayda xogta aruursan ee Heyb Sooca Guryaha.
Hayso dhamaan warqadahaaga ku saabsan codsiga kana dacawee maxkamada qaamaha yaryar hadii qolada gurigu ay jabiso sharcigan. Qolada gurigu waa inay ku siisaa lacag siyaado ah adiga hadii ay jabiyaan sharcigan. Eeg warqadayda xogta aruursan ee Maxkamadaha Qaamaha yaryar Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.
Hadii qolada gurigu ay isticmaasho warbixinada hay’adaha soo baara kireystayaasha, waa khasab inay kuu sheegaan magaca, ciwaanka, lambarka telefanka ee hay’ada ka hor inta aysan qaadin khidmad codsiga. Waa inay ku siiyaan rasiidka khidmada. Hadii aysan ku siin, waydii inay ku siiyaan.
Qolada gurigu kaagama qaadi karto khidmad si ay uga helaan warbixin hay’ad baarid sameysa hadii wax guri ahi uusan diyaar ahayn.
Hadii lagu diido iyadoo sababtu tahay akhbaar ku jira warbixinta baarida kireystaha, la xiriir hay’ada baarida kireystaha. Ka hel nuqul warbixintooda. Waxa aad xaq u leedahay inaad saxdo wixii khalad ah. Eeg warqada xogta aruursan ee, Soo Baarida Kireystaha.
Waxaad xaq u leedahay in si sinaan ah laguula dhaqmo. Waa sharci-darro in qolada gurigu ay ku diidaan sababtoo ah inaad tahay qofka mid ah dadka midabka madow leh ama qof naafo ah, qof qaata cayr ama qof ilmo haysta iyo waxyaabo kale.
Hadii aad ka shakido in lagu takoorayo, wac xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid). Eeg warqadayda xogta aruursan ee Heyb Sooca Guryaha.
Iska ilaali inaad bixiso dabaajiga guriga ka hor inta aan guri in lagu siiyo aan laguu ansaxin aadana saxiixin liiska. Waa ay adkaan kartaa in dabaajigu kuu soo noqoo hadii codsigaaga la diido.
Qaar ka mid qolyaha guryahu waxa ay dadka waydiistaan lacag “sii qabashada” guriga ah ka hor inta aan la saxiixin heshiiska liiska guri degida. Tani waa ay ka duwan tahay dabaajiga caadiga ah. Qolo guri lahi ma qaadi karaan wax dabaaji ah oo “liiska ka sii horeeya” la’aanta heshiis qoraal ah. Heshiiskaasina waa inuu kuu sheegaa sida iyo kolka ay lacagtu kuugu soo noqon. Hadii aad guriga kireysato, qolada gurigu waa inay lacagta aad ku bixisay dabaajiga liiska ka horeeya ay ku aadiyaan kirada.
Eeg warqadayda xogta aruursan ee Guri Raadinta.
Qolada gurigu waa khasab inay adeegsato liis qoraal ah hadii ay sartu leedahay 12 guri ama ka badan.
Akhri liiska ka hor inta aadan saxiixin! Qolada gurigu waa inay kaa siisaa nuqul liiska.
Ha saxiixin liiska ilaa iyo inta aad ka fatashayso guriga. Ka samee qoraal wax walba oo wasakh ah, halaysan ama jaban. Waydii qolada guriga inay saxiixaan qoraalka ayna ogolaadaan inay hagaajiyaan waxa halaysan. Nuqul meel ka dhigo qoraalkaa.
Sidoo kale waa ra’yi wacan inaad sawiro ka qaado kuwaa iyo wixii kale ee dhibaato ah ee aad la kulanto ka dib kolka aad guriga soo degto. U dir qolada gurigaaga iyadoo ay weheliso warqad codsanaysa hagaajinta.
Waa aad kula gorgor tami kartaa qolada guriga inay bedelaan liiska ka hor inta aadan saxiixin. Waa inaad labadiinuba aad saxiixdaan meesha ku xigta wax walba oo la bedelay.
Qaarka mid ah liiska waxaa ku jira waxyaabo sharci-darro ah. Ma aha inaad u hogaansanto qaybahaa liiska hadii aad saxiixdo. Tusaale ahaan, sharcigu waxa uu yiraa qolayaha guryahu kama dhigi karaan in wixii halaaba ay mas’uul ka noqdaan kireystayaashu. Hadii aad qabto su’aalo ku saabsan in liisku uu sharciga waafaqsan yahay iyo in kale, la hadal qareen ka hor ama ka dib kolka aad saxiixdo.
Qolada guriga ama maamulahu waa khasab inay ku siiyaan ciwaankooda ganacsi ee wadada ee warqadaha loogu soo hagaajiyo. Santuukhyada Boostada (P.O. Box) arrintaa kuma filna.
Kolka mudadda liiskaagu ay dhamaato (oo inta badan ah 1 sanno), waa inaad saxiixdaa liis cusub, hadii uusan liiskaagu iskii isu cusboonaysiin. Laakiin hubi arrintaa. Qaar ka mid ah liisaska iskood isu cusboonaysiiya kaliya waxay iskood isugu cusboonaysiin qandaraasyo bil-bil ah.
Hadii aadan saxiixin liis cusub, waxa aad guriga kiraysanaysaa bil-bil kaliya qolada guriguna waa ay ku waysiisan kartaa inaad ka baxdo iyagoo ku siinaya ogaysiis hal bil iyo hal maalin ah.
Mar walba waxaa fiican inaad hesho liis, LAAKIIN, hadii aad guri ku kireysato heshiis afka kaliya uun ah, taa waxaa loo arkaa inay tahay heshiis bil-bil ah. Hadii ay khasab kugu noqoto mar ay noqotaba mar inaad maxkamad aado, waxaad u baahan tahay inaad cadeyso inaad kiro bixiso, kolka hel xafidana rasiidyada!
Dagaal Qoyska Dhexdiisa ah iyo Ka Bixida Liiska
Hadii aadan amaan ahayn iyadoo sababtu tahay dagaal qoyska dhexdiisa ah wac: 1 (866) 223-1111.
Hadii aadan amaan ahayn iyadoo sababtu tahay xoogid laguu geystay wac: 1 (800) 656-4673.
Hadii adiga ama qof aad la nooshahay uu yahay dhibane dhib ka soo gaaray dagaal qoys dhexdii ah, dabagalid, ama faraxumeyn galo oo dambi ah, aadna is leedahay dhibaatooyinku waa ay ii socon hadii aad guriga sii joogto, liiska waa aad joojin kartaa inta uusan dhamaan waqtigiisu. LAAKIIN, hadii aad rabo inaad liiska joojiso inta uusan dhamaan waqtigiisu waxaa jira waxyaabo ay khasab tahay inaad sameyso:
waa inaad ka heshaa nuqul mid ka mid ah qoraaladan:
Amarka Amaan helida (OFP).
Amar la Soo Xiriirid la’aanta ah ama Amarka la soo Xiriirid La’aanta ee Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah haor (DANCO).
Wax u saxiixay mas’uul maxkamadeed oo sheegaya inaad tahay dhibane dhib ka soo gaaray, dagaal qoyska dhexdiisa ah, dabagalid, ama faraxumeyn galo oo dambi ah.
Wax ay saxiixday degmo, gobol, hay’adaha sharci ilaalinta ee qabaa’ilka, oo sheegaya inaad tahay dhibane dhib ka soo gaaray, dagaal qoyska dhexdiisa ah, dabagalid, ama faraxumeyn galo oo dambi ah.
Oraah ka timid “qolo sedexaad oo la aqoonsan yahay.” Qolada sedexaad ee la aqoonsan yahay waa daryeel-bixiye shati leh, la taliyaha dadka la xoogo, taakuleeyaha dadka lagu tacadiyo ee qoyska. Waxaa jira foom ay qolada sedexaad ee la aqoonsan yahay ay isticmaali karto si ay ugu qoraan oraahdooda. Foomkani waxa uu ku lifaaqsan yahay warqada xogta aruursan ee Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada.
Waa khasab inaad siiso qolada gurigaaga ogaysiis qoran ka hor inta aadan guurin. Nuqulna aad adigu naftaada uga sameysato. Sharcigu ma yiraa inta ay tahay mudada ogaysiiska ah ee lagaa rabo inaad bixiso laakiin waxaa inaad siiso qolada guriga mudadda ogaysiiska ee ugu badan ee aad siin kartaa. Ogaysiisku waa inuu yiraa:
in adiga ama qof kale oo gurigaaga ku nool uu ka baqayo inuu wax yeelo hada tacadiyahu
in aad u baahan tahay inaad liiska aad joojiso, iyo waqtiga aad doonayso in liisku joogsado. Uma baahnid inaad siiso 30 ama 60 cisho oo ogaysiis ah iyo
waxa aad doonayso in qolada gurigu ay ka yeesho wixii aad guriga uga tagtay.
Wali waa lagugu leeyahay kirada bisha aad joojiso liiska. Qolada gurigu waa ay qaadan karaan lacagtaada dabaajiga ah, laakiin uma baahnid inaad siiso wax kale qolada guriga si aad u guurto.
Khasab kugu ma aha inaad siiso qolada guriga wax faahfaahin ah oo ku saabsan tacadiga. Qolada gurigu xaq uma laha inay kaa hor istaagto inaad guurto. Qolada gurigaagu uma sheegi karto cid inaad tahay dhibane dagaal dhib ka soo gaaray mana siin karto cid wax akhbaar ah ah oo ku jirta ogaysiiskaaga qoran ama dukumiintiga ku lifaaqan hadii aadan siin adigu qolada guriga ogolaansho. Qolada gurigu kuguma khasbi karto inaad siiso magaca tacadi gaystaha ama dambi geystaha. Qolada gurigu waa ay ku waydiin karaan qofka, laakiin ma aha inaad u sheegto qolada gurigaaga hadii aad is leedahay amaan ma aha inaad qofka magacowdo ama hadii aadan aqoon qofka magaciisa.
Xataa hadii aadan sameyn waxyaabahaas oo dhan, wali waa aad guuri kartaa, laakiin waxaa dhici karta inaad u baahato inaad kirada bixiso ilaa inta qolada gurigu ay ka helayaan kireyste cusub.
Qolada gurigaagu guriga kaagama saari karaan uun sabab ah inaad ahaynd dhibane dagaal qoyska dhexdiisa ah, dabagalid, ama faraxumeyn galo oo dambi ah dhib ku soo gaaray.
Ka eeg warqada xogta aruursan ee Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada.
Mar walba ka hel rasiid kirada aad bixiso. Qolada gurigu waa inay kugu siiso 3-cisho gudaheed rasiidka kirada aad lacagta cadaanka ah ku bixiso. Rasiidka waa inay ku qornaadaan taariikhda, cadadka iyo saxiixa qolada guriga ama maamulaha. Khasab ma aha inuu noqodo rasiidku foom gaar ah.
Liisaska intooda badan, kirada waxaa la iska rabaa in la bixiyo bisha kowdeeda. Qaar ka mid ah liisasku waxa ay leeyihiin wax la yiraa “mudadda sharfida.” Hadii aadan ku bixin kiradaada waqtiga la rabi in la bixiyo, qolada gurigu waxa ay kugu soo dalici kartaa khidmad kiro la daahid ah ama waxa ay xareysan karaan dacwo guri ka saarid ah iyagoon ogaysiis ku siin.
Mar kasta kirada ku bixi waqtiga loogu talagalay in la bixiyo. Kiradaadu waa kharashka ugu muhiimsan kharashyada aad bixiso. Waligaa marna ha isku halayn in qolo guri ay kuu samrayso ayna kaa sugi kirada.
Liiska qorani waxa uu kuu sheegi kolka qolada guri ay kordhin karto kirada. Hadii aadan haysan liis qoran, kolkaa qolada gurigu waa ay kordhin karaan kirada hadii ay ku siiyaan ogaysiis qoraal ah oo ah bil iyo maalin.
Hadii uu qof kula Degan yahay
Aad uga taxadar xulashada qofka kula degaya. Hadii qofka kula degani uusan bixin kirada, waa inaad adigu bixisaa. Hadii qofka kula degani uu liiska jabiyo, guriga waa lagaa saari karaa adiga.
Hadii aad haysato liis qoraal ah, wuxuu oran karaa kuma dari kartid qof cusub liiska hadii aysan qolada gurigu oran waa hagaag arrintaasi ama aad ka hesho iyaga ogolaanshi qoran. Xataa la’aanta liis qoran, waa ra’yi wacan inaad hesho ogolaanshaha qolada guriga.
Hadii korontada magacaaga ay ku qoran tahay, shirkada korontadu waxa ay kugu soo dalici kartaa lacagta biilka oo dhan. Shirkadaha korontadu waxay isku dayaan inay la socdaan dagaanada dadka iyo ciwaanadoodii hore. Hadii aad guurto waxaa dhici kartaa inay kugu soo dalacaan lacagta adeega mar dambe kolka aad degto gurigaaga cusub.
Hadii shirkad koronto ay kugu soo dalacdo biil qof kale magaciisa ah, aadna marna adigu horey u ogolaan inaad bixiso, wac gargaarka sharciga (legal aid). Sidoo kale, wac gargaarka sharci (legal aid) hadii shirkad koronto ay kugu soo dalacdo adeeg ay qolada gurigaagu horey u ogolaatay inay bixiso. Waxaa dhici in laga maarmi waayo inaad tusto liis cadeynaya cida bixinaysa kharashaadka korontada.
Hadii aad guurto, hubi in qolada gurigu ay qoraal ahaan ku ogolaato inay adiga liiska kaa saarto. Hadii kale wali waa lagugu soo dalici karaa kirada. Hubi in magacaaga la saaro korontada iyana.
Eeg warqadayada xogta aruursan ee Hoy Wadaag.
Qolada gurigu waxa ay u soo geli karaan gurigaaga arrimo la xiriira hawl ama xaalad degddeg ah.
Hadii xaalad degdeg ahi aysan jirin, qolada gurigu waa khasab inay ku dadaalaan inay ku siiyaan ogaysiin “macquul” ah.
Hadii qolada gurigu ay gurigaaga soo gasho iyagoon ku siin adiga ogaysiis marka hore, aadana adigu guriga joogin kolkaa, waa khasab inay kuu dhaafaan qoraal yar.
Hadii qolada gurigu ay jabiso xeerkan, waxa aad ka dacweyn kartaa maxkamada Qaamaha yaryar (Conciliation Court) si ay lacagta kiradu kuugu soo noqoto iyo/ama lagaaga saamaxo liiskaaga. Eeg warqadayada Xogta aruursan ee Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.
Khashkhashaada galmada ee gurayaha ee uu sameeyo qofka guriga leh, shaqaalaha guriga, maamulaha ama waardiyeyaashu waa sharci-darro. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Khashkhashaada Galmada Mulkiilaha Gurigu uu Rabo. Kolka qolada guriga ay soo gasho gurigaaga marmar badan ama la’aanta ogaysiis quman, taasi waxa ay noqon kartaa astaan khashkhashaad galmo ah. Wac gargaarka sharciyada (legal aid) hadii arrintaa aad ka walaacsan tahay.
Eeg warqadayada xogta aruursan ee Qolada Guriga aan uga jiraa ma soo geli kartaa Gurigayga?
Kolka aad u baahato in wax lagaa hagaajiyo, wac qolada guriga markiiba, ha sugin.
Hadii xaalad degdeg ahi ay jirto (sida, koronto, ama biyo, ama kulayl la’aan ama musqul jaban ama ogaysiiska guriga inaan lagu noolaan karin ah) wac xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid) markiiba. Waydii Falka Degdeg ah ee Maciinada Kiraystaha (Emergency Tenant Remedy Action). Eeg warqadayada xogta aruursan ee Dhibaatooyinka Dayactirka ee Degdegga Ah.
Hadii aysan xaaladu degdeg ahayn, u qor qolada guriga warqad ay ku qoran yihiin dhamaan dhibaatooyinka gurigu. Ku qor taariikhda nuqulna kala har. Hadii aysan wax uga qaban dhibka 14-cisho gudahood, wac xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid) ka dibna waydi dacwadaha Kiro Rahmida ah. Dacwooyinka Kiro rahmida ah, kiradaada waxa aa u dhiibaysaa maxkamada. Maxkamadu waxa ay amri hagaajinada, waxa ayna kuu soo celin kartaa qaar ka mid ah kiradaada. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan.
Waxaad kaloo wici kartaa fatashada guryaha kirada ah ee magaalada. Fatashayaashu aad ayey u caawin karaan in la sameeyo hagaajinda. Wac xafiisyada fatashaada ee magaalada aad ku nooshahay si aad u ogaato inuu ka jiro barnaamij shatiyeynta kirada ah.
Ha ka hayn lacagta kirada ah qolada guriga. Hana hagaajin wixii halaysan si aad ugu jarato kharaska hagaajinta kirada.
Waa aad ka dacaweyn kartaa qolada gurigaaga Maxkamada Qaamaha yaryar (Conciliation Court) si ay lacag kaaga soo noqoto dhibaatooyinkii kaa soo gaaray guriga aad hagaagsanayn oo aad mudadda ku noolayd. Xataa waa aad dacaweyn kartaa ka dib kolka aad guurto, laakiin waxaa u baahan tahay cadeyn ah in qolada gurigu ay ogayd dhibaatada laakiin aysan hagaajin. Eeg warqadayada Xogta aruursan ee Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.
Ka Xirashada iyo ka Goynta Adeega
Sida kaliya ee qolada gurigu ay guri kaaga saari kartaa waa inay xareystaan dacwo maxkamadeed oo la yiraa guri ka saarid. Qolada gurigu ma bedeli karaan qufulka, ma rari karaan alaabtaada, ma goyn karaan korontada, ama ma ay samayn karaan wax kale si ay kuugu khasbaan inaad ka baxdo guriga iyagoon tagin maxkamada guryo ka saarida marka hore.
Hadii guriga lagaa xirto, wac qolada guriga una sharax in guri ka xirashadu ay dambi tahay sida uu dhigayo Sharciga Minnespota ee Minnesota Statute 504B.225 (ingiriisi kaliya). hadii aysan kuu ogolaan inaad guriga dib ugu noqoto, wac bilayska. Hadii taasi shaqeyn waydo, wac xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid).
Waa aad ka xareysan kartaa kiis dacwo guri ka xirasho ah maxkamad si guriga dib laguugu oglaado. Hadii qolada gurigu ay guriga kaa xiratay ama ay korontadii kaa gooyeen ama ay si “laqdabo,” ah ay u dhaqmeen waxa aad heli kartaa $500 ama ka badan oo lacag ah iyo waliba khidmada qareenka oo ay bixiyaan. Sidoo kale waxa aad ha dhow ka dacaweyn kartaa Maxkamada Qaamaha yaryar. Eeg warqadayada Xogta aruursan ee Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.
Eeg warqadayada Xogta aruursan ee Guri ka xirashada ama ka Goynta Biyaha iyo Korontadu waa Sharci-darro.
Guri Ka Saaritaanada
Hadii guri lagaa saarayo, akhri warqada xogta aruursan ee Guri ka Saarida. Wac, xafiiska Gargaarka Sharciyada (legal aid) markiiba.
Qolada gurigaagu waxa ay maxkamad ka xareysan karaan dacwo guri ka saarid ah hadii aadan kiradu ku bixin waqtigii loogu talagalay in la bixiyo, ama hadii aad sameyso wax liisku leeyahay ma aad sameyn kartid, ama hadii aad guri sii joogtay ka dib kolka lagu siiyo ogaysiis sharci ah oo ku sheegaya inaad baxdo.
Waa inaad hesho warqadaha maxkamada ugu yaraan 7-cisho ka hor waqtiga dacwada.
Tag maxkamada waqtigii laguu qabtay inaad tagto, hadii kale waa lagaa guulaysan adigoon xataa aan helin fursan aad kula hadasho xaakimka. Tag maxkamada xataa hadii aad u baahan tahay in lagu siiyo waqtiga dheeraad ah oo aad ku guurto.
Hadii lagaa guulaysto, aadana heshiis la gaari karin qolada guriga, waqtiga ugu badan ee maxkamadu ku siin karto si aad ugu guurtaa waa 7-cisho.
Hadii lagugu leeyahay lacag kiro, waa khasab inaad lacagta aad maxkamada keento. Hadii lacagtan oo dhan aad maxkamada ka bixiso, guriga lagaama saari doono. Warqadaha maxkamada waxaa kaloo dhici karta in ay ku qoran yihiin cadadka khidmada dacwo xareysiga ee qolada guriga, hadii kale, wac maxkamada si aad u ogaato. Waa khasab inaad bixiso khidmada dacwo xareysiga iyo khidmada adeega ah, laakiin waxa aad codsan kartaa ilaa iyo 7-cisho inaad ku bixiso khidmada adeega.
Hadii aad kirada sii hayso iyadoo sababtu tahay dhibaatooyinka hagaajin la’aan ah awgood, waa khasab inaad maxkamada aad keento dhamaan lacagta kirada oo cadaan ah, jeega idman (money order) ama jeega khasnajiga (cashier’s check) ah. Uma aad baahnaan doontid khidmada la soo daahida iyo mida dacwo xareysiga inaad bixiso, waxa aad u baahnaan doontaa inaad ku dhex bixiso dhamaan kirada oo dhan maxkamada aadna cadeyso in qolada guriga aysan guriga waxa ka halaysan aysan hagaajin.
Diiwaanka maxkamada ee kiiska guri ka saarida ahi waa mid cid walbaa arki karto kolka ugu horeeya ee la xareysto dacwad. Tani badanaa waa ka hor xataa inta aadan ogaan dacwada. Shirkadaha sameeya soo baarida dadka (shirakaha baaraha kireystaha) waxa ay soo sheegi karaan 7-sanno ama ka badan. Waa ay adag tahay in diiwaanada maxkamada la masaxo ama la “tirtiro” si kolkaa shirkadaha soo baarida kiraystahu aysan u soo sheegin.
Kolka aad maxkamada u tagto dacwo guri ka saarid ah, waydii maxkamaada inay tirtirto diiwaanka dacwada hadii aad ku guulaysato kiiska ama heshiis laga gaaro.
Hadii dacwo guri ka saarid ah lagaaga guulaysto, waa ay adag tahay inaad ka dhaadhiciso maxkamada in kiiska la tirtiro, laakiin waa suurtogal ah.
Hadii uu horey diiwaankaaga kuugu jiray kiis hore oo guri ka saarid ah, kaa oo kaa hor istaaga guri helid, la soo xiriir xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid) si loo eego in lagaa tirtiri karo.
Waxaad sidoo kale aad xaq u leedahay inaad ka siiso sharaxaad wixii guri ka saaritaano hore ah shirkadaha soo baarida kireystaha. Waa inay ku daraan sharaxaadaada (ilaa 100 eray) wixii warbixino ah ee ay diraan.
Eeg warqadayada xogta aruursan ee Tirtirada Guriga Ka Saarida.
Hadii aadan haysan liis qoraal ah, waxa ay u badan tahay inaad guriga u kireysanayso bil-bil. Qolada gurigu waxa ay ku waydiisan kartaa inaad ka guurto hadii ay ku siiyaan ogaysiis qoran oo ah 1 bil iyo hal maalin ah. Si kale hadii loo yiraa, hadii ay rabaan inaad ka guurto Luulyo 31, deeda, waa inay ku siiyaan ogaysiis Juun 30 keeda.
Hadii aad haysato ogaysiis qoraal ah aadna doonayso inaad guurto, eeg liiskaaga si aad u aragto inta ay tahay mudadda ogaysiiska ah ee lagaa rabo inaad bixiso. Hadii aadan haysan liis, waa khasab inaad siiso ogaysiis qoran oo ah 1 bil iyo hal maalin oo aad ugu sheegayso qolada guriga inaad guurayso. Qolada gurigu waa khasab inay helaan ogaysiis waqtiga la rabo inay helaan. Ka la har nuqul ogaysiiska aad dirayso.
Uma isticmaali kartid lacagta dabaajiga ah ee kaa taal kirada bisha guriga kuugu dambaysa. Kaliya waxa aad ka boodi kartaa bixinta kirada bisha guriga kuugu dambaysa hadii aad horey u sii bixisay kirada bishaa kolkii aad guriga soo dagaysay.
Guriga isagoo nadiif ah ka bax. Hadii ay suurtagal tahay, waydii qolada guriga inay fatashto guriga kolka aad ka guurto ayna saxiixdo warqad sheegaysa in gurigu gabi ahaanta uu nadiif yahay aysana waxba ka halaysnayn. Ka qaad sawiro hadii aad awoodo.
Hadii aad rabto inaad guriga ka guurto ka hor inta aan mudadda liisku dhamaan, la hadal qolada guriga markiiba. Waxaa dhici karta inay wuxuun kula furdaamiyaan, gaar ahaan, hadii aadan u heli karin iyaga kireystayaal cusub. Hadii kale waxaa dhici karta inay khasab kugu noqoto inaad kirada bixiso ilaa iyo inta mudadda liisku ay ka dhamaanayso.
Hadii ay khasab noqoto inaad guurto sababtoo ah dhibaatooyinka hagaajin la’aan guriga ah awgood ama wax kale oo dhibaatooyin ah oo khalad qolada gurigu ay sameysay ah, hayso cadeymo dhibaatooyinka iyo wixii aad sameysay si aad uga hesho in qolada gurigu ay wax ka qababto dhibaatada. U dir warqad qolada guriga. Ka dib waa aad ku muduci kartaa in aysan ahayn inaad kiro bixiso ka dib kolka aad guurto.
Hadii guri lagaa saaro ama aad guurto aadna qaar ka mid ah alaabtaada aad guriga uga tagto, Eeg warqadayada xogta aruursan ee Dib U Helitaanka Hantidaada Ka Dib Marka Aad Guurto.
Marba hadii aad siiso qolada guriga ciwaankaaga boostada ee cusub, waa inay kuugu soo celiyaan dabaajigaaga 21-cisho gudahood kolka aad ka guurto. Hadii aysan kuu soo celin gabi ahaanba dabaajigaaga, waa inay kuu soo diraan warqad sharxaysa sababta. Hadii gurigu uu noqdo guri aan deegaan ku haboonayn, waxa aad ka codsan kartaa in dabaajigaaga laguugu soo celiyo 5-cisho gudahood.
Dabaajiga dul-saarkiisu waa 1%. ee 1%, dabaajiyda $500 waxa ay kasbadaan dulsaar $5 sannadkii.
Qolada gurigu waxa ay kaa jaran kartaa uun wixii la jabiyo lacagtooda, kirada aan la bixin iyo khidmadaha aad ku heshiiseen (sida lacagaha nadiifinta wixii alaab ah ee iyagoo wasakhaysan aad ka tago, lacagta furayaasha dhuma, iwm.)
Qolada gurigu kuguma soo dalaci karto adiga wax lacag ah oo ku saabsan “duugowga caadiga ah ee guriga.” Ma ay lahaan karaan wax ay khasab kaaga jarayaan oo la xiriira duugowga caadiga ah ee alaabta sida lacag ay kaaga jaraan dhaqida rooga ama darbi rinjiyeynta.
Hadi qolada gurigu kuu soo celin waydo dabaajigaaga, waxa aad ka dacaweyn kartaa maxkamada Qaamaha yaryar (Conciliation Court). Eeg warqadayada Xogta aruursan ee Lacagta Keydka Ee Kirada iyo Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.